Facebook » ရင်ကို ထိမှန်သော …	15
Posted by မြစပဲရိုး on Nov 2, 2015 in Facebook, Photography | 15 comments
ဇီဇီခင်ဇော် says: စိတ်ထဲ အမျိုးမျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။
Kaung Kin Pyar says: အဲ… ဓာတ်ပုံထည့်လို့မရနေလို့…။ ဖဘမယ် အကျီင်္ကျောကွဲနဲ့ အဖွားအိုတစ်ယောက် NLD အလံလေးကိုင်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံလေးလဲ မြင်လိုက်သေးတယ်…
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်ကတော့….
Mike says: .လူတွေရဲ့ပြောင်းလဲလိုစိတ်
naywoon ni says: တစ်​ချို့က ယုံကြည်​ချက်​နဲ့ ​ထောက်​ခံတယ်​ ။
အင်း ​ရွှေပြည်​ကြီးမှာ ဖြစ်​ပျက်​​နေပုံ​ပြောကြည့်​တာ​လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ကျနော်တော့ နံပတ် ၂ ဗျို့။
naywoon ni says: ကျ​နော်​လဲ ၂ ပဲဗျ ခုထိ ​ရွှေပြည်​ကြီးထဲမှာသာ ​နေတာ ပါတီဝင်​မဖြစ်​​သေး ပါတီရုံး​ရှေ့ကပဲ ဖြတ်​ဖူးတယ်​ ။ ရုံးထဲမ​ရောက်​ဖူး​သေး ။ ကိုယ်​စားလှယ်​​လောင်း​တွေလဲ သိ​တော့သိတယ်​ ။ စကား မ​ပြောဖူး​သေး ။ (သိတယ်​ ဆိုတာလဲ ကိုယ်​က သူ့ကို သိတယ်​ ဆိုတာပဲ ရှိတာ​နော်​ သူက ကိုယ်​ မသိဖို့က များတယ်​ )
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမေစု ဟောပြောပွဲနေ့မှာ အနုပညာရှင်တွေလည်း လာဖျော်ဖြေကြတယ်လေ… သူတို့ကို ကြည့်ပြီး အတွေးဝင်မိတယ်… သူတို့တွေလည်း NLD တီရှပ်တွေ ဝတ်ထားကြတာ.. စိတ်ထဲမှာ တူညီတယ် ဆိုတဲ့ သဘောတရား ဝင်လာတယ်… သူတို့တွေဟာ အပြင်မှာဆိုရင် ကိုယ့်ထက်အများကြီး ဝတ်ကြစားကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ .. အခု NLD တီင်္ရှပ်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ.. သူတို့လည်း ဒီအကျီ.. ကိုယ်တွေလည်း ဒီအကျီ… တစ်ကွင်းလုံးလည်း ဒီအကျီ.. အားလုံး တစ်သွေးတစ်သားတည်းဆိုတာ ခံစားလိုက်ရတယ်… ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ…
Mike says: Nyi Htun
Mike says: အိ အိ မွန်
လုံမလေးမွန်မွန် says: အခုလောလောဆယ်.. ပါတီဝင်တွေက မဲရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ လုပ်ရှားလို့မရဘူးလို့ ထပ်တွေ့လာရတယ်… ဆိုတော့ ပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ ဗော်လံတီယာတွေက လုပ်ရမှာပဲ… လူရေဖို့.. survey ဆင်းဖို့…
မြစပဲရိုး says: . နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့် ရရင်တော့
E.မြောက်မြောက် says: စားချင်စရာပဲ ရှလွတ်ပတွတ်ပြွတ်စ် စကားမစပ် တစပ်
မြစပဲရိုး says: တစ်ချို့ က စာ တွေ မဖတ် ဘဲ လိုက် တာမို့
အောင် မိုးသူ says: ရင်ကိုထိမှန်ရပါတယ်။